1 Funda le ndatshana ehlanganisa imininingwane ephelele ngenqubo yePrincidence ku-Apple Watch.
2 Indlela yokwenza FaceTime ucingo usebenzisa Siri ku-Apple Watch
3 Indlela yokwenza FaceTime ucingo usebenzisa Ucingo App ku-Apple Watch
4.1 Okuningi kusuka kusayithi lami
Funda le ndatshana ehlanganisa imininingwane ephelele ngenqubo yePrincidence ku-Apple Watch.
FaceTime lomsindo kuyindlela Amazing ukukhuluma nabanye abasebenzisi Apple kudivayisi ngenxa esitebeleni omsulwa ikholi. Kodwa ukuthi akusi ayenele iPhone yakho noma iPad. Ungenza FaceTime lomsindo obiza Apple lwakho lokubuka, kanjalo. Kungakhathaliseki ukuthi ubhekene sisebenzisa Siri noma isicelo Ucingo, ngokubeka ucingo FaceTime ngokwanele elula.
Indlela yokwenza FaceTime ucingo usebenzisa Siri ku-Apple Watch
Zwi “Sawubona Siri“, cindezela bese intuba Digital Umqhele, noma chofoza Siri igajethi uma ngabe sisebenzisa ke phezu Siri iwashi ubuso.
State “FaceTime (Igama lokuxhumana sika)“.
Apple Ukubuka ngeke okwamanje uqhubeke ukubiza oxhumana naye sisebenzisa FaceTime lomsindo.
Jabulela ucingo lwakho.
Indlela yokwenza FaceTime ucingo usebenzisa Ucingo App ku-Apple Watch
Vula isicelo Hambayo ku yakho Apple Watch.
Thinta on the Imininingwane nge udinga ukuba ucingo.
Thepha uphawu Ucingo.
Thinta FaceTime lomsindo.
Funda lesi sihloko okuhlanganisa ulwazi oluphelele mayelana inqubo FaceTime ku-Apple Watch. Landela izinyathelo njengoba inikezwe ukusetshenziswa FaceTime ku-Apple Watch usebenzisa Siri noma i-Apple App.
Ifayelwe Ngaphansi: Download FaceTime Tagged With: FaceTime Call on Apple Watch